माछापुच्छ्रे बैंकको रु. ३ अर्बको ऋणपत्र असार ३१ बाट निष्कासन गरिने, कति पाइन्छ ब्याज ? Bizshala -
काठमाण्डौ । माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेडको ३ अर्ब रुपैयाँबराबरको ऋणपत्र यही असार ३१ गतेबाट बिक्री खुला गरिने भएको छ।
बैंकले ‘८.५ प्रतिशत माछापुच्छ्रे डिबेन्चर–२०८७’ नामक ऋणपत्र निष्कासन गर्न लागेको हो। बैंकले १ हजार रुपैयाँ अंकित दरका कुल ३० लाख इकाइ ऋणपत्र जारी गर्नेछ। जसमा १८ लाख इकाइ व्यक्तिगत तबरबाट बिक्री गरिनेछ। बाँकी १२ लाख इकाइ भने सर्वसाधारणलाई बिक्री गरिनेछ।
सर्वसाधारणका लागि निष्कासन गरिने कुल १२ लाख इकाइमध्ये पनि ५ प्रतिशतले हुन आउने ६० हजार इकाइ सामूहिक लगानी कोषका लागि छुट्याइएको छ। बाँकी ११ लाख ४० हजार इकाइमा सर्वसाधारणले खरिद आवेदन दिन सक्नेछन्।